Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wakhtiga waarta » Ku Dalbashada Dalxiiska Joogtada Ah Tamar Dib Loo Cusboonaysiin Karo
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Warshadaha Warshadaha • News • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dalxiiska waarta iyo Tamarta Cusboonaysiin karta
Isku xirka warshadaha isku fikirka ah, si loo abuuro rucubyo isku dhafan wax cusub ma aha. Tilmaan-bixintu waa in lagu tilmaamo Tamarta Cusboonaysiinaysa inay tahay astaan ​​u dhaxaysa soo-jeedinta Socdaalka & Dalxiiska ‘joogtaynta’…. baaxad weyn.
Jawigayaga si xun ayaa loo xumeeyay, tirada sii kordheysa ee booqdayaasha ka hor Covid-19 ayaa ka dhigtay meelaha ugu muhiimsan ee dalxiisayaasha.
Haddii aan ku darsanno wasakheynta saameynta isbeddelka cimilada oo ay ku jirto masiibada, waxaan ka warqabnaa in yar oo ka yar ilbaxnimada isgoysyada.
Ka wareejinta fossil-ka ilaa Tamarta Cusboonaysiinta macnaheedu waa inaad ka bilowdo dhagaxa hoose ee 'silsiladda waarta'.
Ka dib oo dhan, Tamarta Cusboonaysiinaysa waxay ka soo baxdaa isku-daygii caws-xididka ee deegaanka oo tobanaan sano ka hor u socday il muhiim ah oo ballaadhan oo ah 'tamar cagaaran' tamar maanta.
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo waa deegaan, madaxbannaan oo aan xad lahayn; looma baahna in dagaal lagu qaado. Labadaba Dalxiis waara iyo Tamarta Dib -u -cusboonaysiinta waxay wadaagaan fikrado isku mid ah. Iyaga oo adeegsanaya saameyntooda wax -soo -saarka, labada wershadood midba midka kale wuu kaabayaa oo is kaabayaa.
Qaabka aan u waarayno wuxuu si gaar ah uga muuqdaa xaaladda jirka iyo muuqaalka kore ee nafteena iyo deegaankeena. Dareenku mar walba ma fiicna: Dhismayaasha burburay, fagaarayaasha wasakhaysan iyo jidadka qallafsan, wabiyada wasakhaysan iyo muuqaalka leh ee ay ka buuxaan dhalooyin caag ah iyo qashin kale: kuwani waxay tilmaamayaan tilmaamayaasha dad badan oo aan danaynayn iyo go'aammo badan oo go'aan -qaatayaasha.
Jawigayaga ayaa si ba'an u wasakhaysanaa sannadihii la soo dhaafay, tirada sii kordheysa ee booqdayaasha ka hor Covid-19 waxay sameysay dhabooyin waddooyin waddooyin ah iyo tilmaamayaasha socdaalayaasha meelaha dalxiiska. In kasta oo tan iyo waagii hore soo jeedinta 'muuqaalka qurxoon' ay noqotay mid ku filan khubarada inay adeegsadaan iyo booqdayaasha inay iibsadaan, wasakhaynta bay'adu waa mid laga naxo oo la fahmi karo: Maaddaama entropy -ku aysan ka soo horjeedin tamarta, haddana maqnaanshihiisa, sidaas darteedna wasakhdu maaha mid ka soo horjeedda nadaafadda, laakiin maqnaanshihiisa.
Haddii aan ku darsanno wasakheynta saameynta isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka kale ee bulshada, dhaqaalaha iyo caafimaadka ee maanta jira, oo ay ku jiraan masiibada, waxaan ka warqabnaa in yar oo ka yar ilbaxnimada isgoysyada, oo ay ku jiraan doodo aad u murran iyo goobo dhisme oo adag. Su’aashu waxay tahay, meesha laga bilaabayo, haddii aysan masiibooyin lama filaan ah ku talin tallaabo degdeg ah?
Nooc kasta oo la qabsado waxaa lagu sameeyaa tamar-tamar la'aan waxaa jira entropy, oo ah xaalad taagan. Tamarta - ilaa hadda inta badan waxaa horseeday quwadda atomiga, alwaax iyo dhuxul, ama shidaal iyo gaas, oo aan weligeed madax xanuun u keenin dalalkeenna aadka u warshadaha leh. Waxaan la qabsanay in la xiriira bixinta tamarta sida 'laga soo bilaabo godka' sida la siiyay.
In yar oo shaki ah, inkastoo: Bilowgii, tamarta atomigu waxay la kulantay halista shucaaca iyo dhibaatada kaydinta qashinka nukliyeerka. La yaab ma laha in awoodda atomigu noqotay bartilmaameedka ugu badan ee dhaqdhaqaaqyada mudaaharaadayaasha bay'ada, gaar ahaan tan iyo markii shilalka warshadda tamarta nukliyeerka la ururiyey, iyada oo Chernobyl ay gaadhay heerkii ugu sarreeyey 1986. Way caddahay: In kasta oo tamarta atomigu ka xoroobaan daalidda kuwa gaasaska cagaaran, isticmaalkeeda nabdoon waa wax walba laakiin dhib ma leh.
Waqtigii aan sidoo kale fahannay in tamarta fosil -ku aysan kaliya waxyeello u geysan deegaankeena dabiiciga ah iyo cimilada, laakiin sidoo kale ay xaddidan tahay helitaankooda. Waxaa la gaaray waqtigii la gaari lahaa ilo kale oo tamar ah. Dib -u -cusboonaysiinta sida dabaysha iyo qorraxda ayaa ka dhigtay ajandaha shirka cimilada, isla markiiba Tamarta Cusboonaysiinta waxay gaadhay in ka badan saddex meelood meel iyo in ka badan wadarta isticmaalka tamarta. Wadadu waxay u muuqatay mid u furan mustaqbal tamar nadiif ah, haddii aysan jirin caqabado yar yar iyo kuwa waaweyn oo laga gudbi karo, marka hore la xuso isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka kaydinta.